Kala ra’yi duwanaantu ma quudineysaa Dowladnimada Soomaaliya? – Kalfadhi
Soomaaliya waxay juhdi iyo dadaal xoogan ugu jirta dib hanashada dowladnimadeedii adkeyd ee ka burburtay 1991-kii. Hase ahaatee, dowlad kasta oo soo mareysay ilaa sanadkii 2000 waxay halis u aragtaa mucaaradnimada inta badan uga timaada siyaasiyiin Xubno ka ah Golayaasha Dowladda ama jooga dibadda dowladda.
Marka laga hadlayo kala aragti duwanaanta xukumadda iyo mucaaradkeeda, waa mid aad looga dareemo Soomaaliya oo dhan hadda, iyadoo Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) ay muujiso iney arrintaas u aragto halis, mucaaradkuna ay u arkaan iney tahay xaq siyaasi ah oo ay leeyihiin. Waa sababta ay dad badan u rumeysan yihiin iney xukumaddu weeraro hubeysan ugu qaaday mucaaradkeeda, una xirtay.
Hogaanka iyo Xubnaha Xukumadda ayaa si dadban magacyo kala ugu yeera siyaasiinta mucaaradka ah, sida Qaran Dumis, Dowlad Diid, Daneystayaal iwm, waxaana ay dad badan aaminsan yihiin iney si aan rasmi ahayn (sharci ahayn) u sameysatay koox dhalinyaro ah oo, iyagoo magacyadaas adeegsanaya, kula dagaalama Baraha Bulshada qof kasta oo u soojeediya dhaliila Xukumadda iyo Hogaankeeda.
Dhanka kale, Mucaaradka Xukumadda waxaa lagu dhaliilaa ineysan eedeymahoodu waqtiyeysneen, oo tilaab kasta oo ay xukumaddu qaadaba ay durayaan. Mararka qaar arrin ay maalin ku dhaliileen dowladda ayaa markii ay dib uga hor timaado ay haddanna ku eedeeyaan, taas oo loo macneysan karo ineysan dhaliilidda dowladdu ahayn mid ku saleysan aragti siyaasadeed ee ay tahay iska necbaan xukumadda hadda jirta. Waxay dad badan rumeysan yihiin in mucaaradka Soomaaliya ay ugu dambeyso markuu xil ama lacag ku helo mucaaradnimadiisa.
Cabdirisaaq Maxamed Axmed (Jindi), oo ka tirsan Golaha Shacabka, sidoo kalane ka tirsan xubnaha ka aragtida duwan Hogaanka Xukuumadda Soomaaliya ee mucaaradka loo yaqaano, ayaa u arka mucaaradku iney yihiin dadka ku ilaaliya dowladda shaqadeeda. “Aniga, waxaan qabaa iney dan ugu jirto (xukumadda), laakiin iyadu qofkii ka aragti duwan waxay u aragtaa inuu yahay Qaran Dumis” ayuu yiri Xildhibaan Jindi. “Balse xaqiiqada waxa waaye in dad ka aragtida duwan ay talo iyo tusaale ka qaadato” yuu hadalkiisa raaciyey.
Xildhibaan Cabdi Shire Jaamac (Ciyaar Jecel) ayaa ku dhaliilay mucaaradka dowladda sida ay hadda u dhaliilaan shaqada xukumadda. “Haddii wax dhisid loo abaabulay kala aragti duwanaantu waa mid wanaagsan, basle arinta Soomaaliya, sidaa la socoto, waa xil doon, dhaqaalo raadis iyo Qaran Dumis” ayuu Xildhibaan Ciyaar Jecel ku yiri Kalfadhi. Waxa uu qabaa in, marka sidaas uu sheegay ay mucaaradnimadu ku saleysnaato dan gaar ah, aysan xal u ahayn qaranka iyo dowladnimada.
Laakiin, Xildhibaan Jindi waxa uu rumeysan yahay in, nuuc kasta oo ay tahay dhaliisha mucaaradka, laga dhex heli karo wanaag anfacaya dowladnimada iyo siyaasadda nidaamka markaas jooga. Laakiin, ineysan xukumaddu taas garan ayuu ku dhaliilaya Dowladda Farmaajo. “Hadii aysan wada qaadan karin talada iyo tuusalaha mucaaradka iyo siyaasiinta ka aragtida duwan, waa iney qaadataa qeyb ka mid ah, waana iney iska toosisaa meelaha laga dhaliilay” ayuu yiri Xildhibaan Jindi.
Barafasoor Cabdulqaadir Geyfo, oo bare ka ah Cilmiga Siyaasadda, ayaa u sheegay kalfadhi in mucaraadka iyo dadka ka aragtida duwan xukumadda ay dowladnimadu aad ugu baahan tahay. Balse, waxa uu sheegay inuu ku talin lahaa iney mucaaradnimadu noqoto mid wax-dhista, oo tartantan gelisa dowladda, sida uu hadalka u dhigay. “Dowladdu waa u baahan tahay mucaarad iyo siyaasiyiin ka aragti duwan” ayuu yiri Barafasoor Cabdulqaadir Geyfo. “Mucaaradku waa muraayadda dowladda; la’aantiis dowladi ma shaqeyn karto” ayuu Barafasoor Geyfo raaciyey hadalkiisa.
Madasha ugu weyn ee lagu soo bandhigo ku kala ra’yi duwanaanta siyaasadda waa warbaahinta, gaar haan tan casriga ah ee Baraha Bulshada ee aan tifaftirka lahayn. Idaacadaha, Wabseedyada iyo Teleefishinnada ayaa aad uga hadla warar ku saabsan Mucaaradka iyo Muxaafadka Dowladda, waxaana ay wariyaashu xudun u noqdeen bar ay isugu yimaadaan xogo, warar iyo aragtiyo iska soo horjeeda.
Faysal Cabdullaahi Maxamed, Tifaftiraha Radio Risaale, ayaa Kalfadhi u sheegay in ay soo wacaan, sidoo kalane ay shirar jaraa’id u qabtaan siyaasiin mucaarad ah oo aad u dhaliila dowladda iyo kuwa muxaafad ah oo soo bandhiga waxqabadka hogaanka talada haaya, iyagoo ka badbadinaya. “Aad ayaan uga fiirsanaa tabinta wararka aan ka helno labada dhinac. Waqtiyada qaar waxaan la kulanaa warar badan oo ka badbadis ah. Dhinacyadu waxay kaa dalbanayaan iney adeegsadaan warbaahintaada” ayuu yiri Faysal.
Wararkaas ay suxufiyiintu u baahiyaan shacabka, Xildhibaan Cabdirisaaq Jindi waxa uu qabaa iney kuwa ugu quudinta badan dowladnimada ay yihiin qaarka ay Dowladda Farmaajo dhibsato, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay in hadii aysan jirin siyaasiyiin iyo shaqsiyaad ka aragti duwan dowladda aysan dhaqaaqi karin xukuumadda. “Rajo beel iyo kalsooni darro ayaa ku dhaceysa shacabka, hadii aan la dhaliilin dowladda, xukuumaddana waxay noqoneysaa fadhiid, hadii aysan helin mucaarad tilmaama” ayuu yiri Xilhdibaan Jindi.
Barafasoor Cabdulqaadir Geyfo waxa uu Kalfadhi la wadaagay fikir u yara dhaw kaas uu qabo Xildhibaan Jindi, oo waxa uu sheegay iney muhiim tahay iney mucaaradku tusiyo xukumadda dhaliilaha ay leedahay. “Dalkaan waxa uu u baahan yahay mucaarad wax dhisa, oo dowladda kula tartama barnaamijyo ka wanaagsan waxqabadkeeda” ayuu yiri Geyfo.
Balse, Xildhibaan Cayaar Jecel waxaa, sida uu u sheegay Kalfadhi, uu qabaa in mucaaradnimada Soomaaliya ee hadda ay tahay “teyda ii yeel”, sida uu hadalka u dhigay. “Waan soo taaganahay, kursi ayaan rabaa, hadii aan lay siinin wax soconaya malahan, waaye mucaaradka Soomaaliya” ayuu yiri Xildhibaan Cayaar Jecel.
Dad badan ayaa rumeysan in dacaayadaha leysu mariyo warbaahinta ay sanadihii damba suuq fiican ka lahaayeen Soomaaliya, taas oo ka dhigan in ay warbaahinta soo galaan xogo ay in badan oo ka mid ah sal lahayn. Wariye Faysal Cabdullaahi Maxamed waxa uu sheegay in ay taasi sii labalaabtay shaqadoodii, oo ay juhdi badan geliyaan tabinta war raad leh oo ay hubiyeen.
“Waan raadinaa dhinaca la eedeeyay, si aan u helno xog labada dhinac ah, waqtiyada qaar baraha bulshada ee Internate-ka ayaa lagu soo bandhigaa warar been ah, sababtoo ah dhinacyadu waxay leeyihiin guul-wadayaal Internate-ka ku amaana” ayuu yiri Faysal. Ha la kala ra’yi duwanaado, laakiin dhaqanka ku saleysan baahinta xog aan run ahayn ayaa ka dhigaya warbaahinta mid aan qiima lahayn, gaar ahaan Baraha Bulshada. Su’aashuse waxay tahay: Kala ra’yi duwanaantu ma quudineysaa Dowladnimada Soomaaliya?